दि कर्मा'को गीतमा नीताको जवानीको बजार ! | Glamour Nepal
Home » फिल्मी न्युज / गसिप » फिल्मी समाचार » दि कर्मा’को गीतमा नीताको जवानीको बजार !
दि कर्मा’को गीतमा नीताको जवानीको बजार !
फिल्म ‘दि कर्मा’को पहिलो गीत ‘बजार लाग्या छ’ को भिडियो सार्वजनिक भएको छ। भिडियोमा नायिका नीता ढुंगाना र नायक करण बर्माले फिचरिङ गरेका छन्। भिडियोमा नायिका परमिता राज्यलक्ष्मी राणा रिसाहा लुक्समा छिन् भने बुद्दि तामाङलाई पनि देख्न सकिन्छ।
गीतमा कोशिस क्षेत्रीको शब्द तथा संगीत रहेको छ भने मनिषा पोखरेलको स्वर रहेको छ। यस गीतका कोरियोग्राफर रामजी लामिछाने हुन्। फिल्मका गीतहरुमा कोशिश क्षेत्री, मानस थापा र अंकित बाबु अधिकारीको संगीत छ।
जय राज रायले निर्माण गरेको फिल्मलाई देव कुमार श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन्। नेपाल र भारतको सिमा क्षेत्रमा हुने घटनामा बनेको उक्त फिल्मलाई रामेश्वर कार्कीले छायांकन गरेका छन्। मंसिर ७ गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरिएको फिल्ममा अष्ट महर्जनको द्वन्द्व छ।
जय मिडिया म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.को ब्यानरमा बनेको ‘दि कर्मा’ को कथा निर्माता राय आँफैले लेखेका हुन्। निशा खतिवडा निर्मात्रीको रुपमा रहेको फिल्मको छायांकन नेपालको तराई क्षेत्रमा भएको हो।
भारतका मोडल तथा कलाकार करण वर्माको अभिनय रहेको यो चलचित्रमा करणका अलावा नीता ढुंगाना, परमिता राज्यलक्ष्मी राणा, बुद्दी तामाङ्ग, देव कुमार श्रेष्ठ, अनुप सक्सेना, संगीता नापितलगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ। काठमाडौंमा काफिया फिल्मस् र उपत्यका बाहिर बैङकेटेश ईन्टरटेन्मेन्टले वितरण गर्ने ‘दि कर्मा’ को स्क्रिनप्ले र डाइलग शुशील पोखरेलको हो।
प्रसादको ‘बनकि चरी’ – निश्चल, अन्जली र विपिनको दोहरी
८ मिनेट लामो दृश्य खिच्न चिरञ्जिवीले खर्च गरे ५४ करोड, ट्रेलर हेर्नुहोस्
फिल्म निर्मण गर्दै नेपालकी पहिलो नायिका भूवन चन्द, नीता र मिरुना मुख्य हिरोइन
एक्सन प्याक्ड ‘दि कर्मा’को फर्स्टलुक: एङग्री लुक्समा देखिए करण
उत्कृष्ट नायक नायिका: नाजिर र नीता / पपुलर प्रदिप र प्रियंका
मञ्जुको गीतमा दीपेन्द्र आउँदा नीता फुरुंग
बेडरुममा एक्लै हुँदा के के गर्छिन् नायिका निता?